सुतिरहेकी थिइन् महिला, उठ्दा त छिरी सकेको रहेछ, तुरुन्तै अस्पताल पुर्याएर हेर्दा त……. – Sapana Sanjal
May 16, 2021 655
Sapana Sanjal : यो दुनियाँमा कहिलेकाहीँ पत्याउनै नसकिने खालका यस्ता घटना हुन्छन्, जुन सुन्दा पनि आँत नै सिरिङ्ग हुन्छ । हालै रुसमा एकजना महिलाको मुख हुँदै घाँटीभित्र छिरेको एउटा सर्पलाई बल्लतल्ल बाहिर निकालिएको छ ।
Next१०० बर्षअघि कस्तो थियो कोरिया ? त्यतिबेलाको कोरियाको जनजिवन कस्तो थियो ? हेरौं यि १२ वटा फोटोमा